Ezona ncwadi zemidlalo zibalaseleyo
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo zebasketball
Apha umncedisi wayengomnye wabo, njengomntwana, bahlala kude kube sebusuku ukuze babukele imidlalo ye-NBA echazwe nguRamón Trecet. Yayiyimihla kaMichael Jordan, kaMagic Johnson, waseStockton kunye nonoposi uMalon, wamakhwenkwe amabi aseFiladelphia, kaDennis Rodman kunye nokugqwesa kwabo, kwe…
Iincwadi ezi-5 zebhola ekhatywayo
Sele nditshilo kaninzi ukuba into yam ibingasokuze ndiyikhabe ibhola, ubuncinci hayi ngobuncinci bobabalo. Nangona kunjalo, xa ndandineminyaka eli-10 okanye eli-11 ubudala, ndafumanisa ukuba ibhola kunye noncwadi zinokuba nendawo yokuhlangana. ...
Umoya. Ibali likaMichael Jordan nguDavid Halberstam
NgeNetflix "irhafu" kulowo wayekuyo kwaye usengoyena mdlali weendaba kwezomhlaba wonke, uMichael Jordan, owayengumntu owayethanda ubuntwana bakhe (kunye nokuxakaniseka kweentsomi ebuntwaneni) wafumanisa ukuba ukuhamba kwexesha akunanceba ngakumbi . Ukuziva ...
Ngaphantsi kwehupula, nguPau Gasol
Kwakukho ixesha apho ndiginya yonke imidlalo ye-NBA eyayisasazwa nguRamón Trecet ngoMgqibelo ebusuku ngeTVE. Mhlawumbi kwakungekho nkqu nemixokelelwane yabucala ...
Italente yendalo, nguRoss Raisin
Akunakulunga ukuba unakekele iminqweno yabanye ngokwakho. Xa usengozini yokuwela kwisilingo esiyingozi sokuzenza into abanye abayilindeleyo ukuba ube yiyo, ngaphezulu koko unguye okanye uyidinga, ujongene nengozi. Umzekelo we ...
Isithoba sobuxoki, nguFilipu Kerr
Kwibhola ekhatywayo isitsotsi kusekho amagama acebisayo phakathi kokudinwa kwe-hackneyed kunye nokukhaba kwisichazi-magama. Ukuba sihlalutya igama elithi "buxoki buthoba", ngaphaya kwentsingiselo yalo kwinqanaba lengca, sifumana i-dichotomy engenakuthelekiswa nanto kuncwadi nakwifilosofi. Ikhutshiwe nakweyiphi na ...
Indlela esiye ngayo kumdlalo wokugqibela waseWembley, nguJoseph Lloyd Carr
I-epic yemidlalo ngokugqwesa yile isinika uDavid omncinci malunga nokuhlisa uGoliyati owayenobuqhophololo. Ngokuchasene nento edla ngokwenzeka ngokwenyani, imidlalo yokhuphiswano enjengebhola ekhatywayo inikezelwa kakhulu kwezi zinto ziphambeneyo ezisondeza omncinci kufutshane ...
Usale kakuhle, uVicente Calderón, nguPatricia Cazón
Masibe sengqiqweni. Ukuba kukho iklabhu yasentsomini ngokugqwesa eSpain, yiyo iAtltico de Madrid. Intsomi yenziwe ukusuka koyisa ngokuchasene nobunzima nakwisihogo emva kokuwa okuyintlekele. Le kuphela kwendlela yokufezekisa uzuko kwaye yintoni eza nayo: intsomi. ...